Kedu Ụdị Ụdị Achọghị Eche Dị n'Ebe Ahụ?
Tupu anyị amalite ịbanye na SEO dị njọ, kọwaa ihe SEO dị njọ bụ.
The Nature of Negative SEO
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, SEO dị njọ bụ otu ihe omume sneaky iji mee ka ọnọdụ gị dị na nsonaazụ ọchụchọ.Mgbalị a nke obi ọjọọ a na-eme na ebe nrụọrụ weebụ gị na-apụkarị na peeji nke, nke pụtara njikọ na-ekwekọghị n'okike na saịtị gị ma ọ bụ na-edegharị ihe na saịtị gị.
Ọ bụ ezie na ọjọọ SEO abụghị ihe kpatara ụda ntụlị na mberede, ọ kaara gị mma ịmara otú ị ga-esi kọwaa ma ọ bụrụ na mmadụ na-emejọ ọnọdụ gị.
Seo-page SEO na-ezo aka na SEO na-elekwasị anya na ebe nrụọrụ weebụ gị n'emebughị ya na ya. Nke a bụ ndepụta nke ụdị nke kachasị mma na-ewepụ ihe na-adịghị mma bụ SEO na-ewe:
Enwere obere ohere na njikọ abụọ nke njikọta ga-emerụ gị ahụ nhazi saịtị. Otú ọ dị, mgbe a bịara jikọta ala ubi, mgbe ahụ a ga-enwe ike ibuso agha agha.
Dịka iwu, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị hacker njikọ na-eji otu ihe arịlịka arịlịka ahụ. E nwere ike ijikọta arịlịka ndị a na-ejikọtaghị na saịtị weebụ ma ọ bụ tinye isiokwu a na-atụkwasị anya iji mee ka njikọ onye njikọ ahụ dị ka onye nwe ya na-azụ ya.
Iji gbochie mwakpo dị otú ahụ, na-elele njirimara njikọ njikọ gị mgbe niile.
SEO SpyGlass ngwá ọrụ nwere ike inyere gị aka na ebe ọ na-enye gị ogo ọganihu maka abụọ:
Ọnụ ọgụgụ nke na-ezo aka ngalaba;
Ọnụ ọgụgụ nke njikọ na profaịlụ gị.
Ụdị ihe dị iche n'ime nke abụọ a bụ ihe mere ị ga-eji hụ njikọ ndị ị nwetara n'oge na-adịbeghị anya.
Ụzọ ọzọ ndị na-asọmpi nwere ike isi bibie ọnọdụ gị bụ ịgụ na ịdekọ ọdịnaya gị na weebụsaịtị ndị ọzọ. Nke a na-arụ ọrụ dịka ndị a: mgbe nchọpụta ahụ chọtara ọdịnaya dị iche iche na ebe nrụọrụ weebụ dị iche iche, ọ na-ahọrọ naanị otu mbipute ka ọ bụrụ ọkwa. Ọ bụ ezie na engines ọchụchọ na-achọpụta ngwa ngwa nsụgharị mbụ, a na-enwekarị ohere maka ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ijide n'aka na saịtị gị adịghị arụpụta ọdịnaya gị, mgbe ahụ, ị ​​ga-enyocha ya mgbe niile site na ngwa Copyscape nke na-ekpebi ihe omume nke mbipute ọdịnaya. Ọ bụrụ na ịchọta ihe odide gị nke ọma, kpọtụrụ onye na-elekọta webmaster ma gwa ya ka ọ wepu ibe gị.
Mmetụta SEO na-adịghị mma na-agụnye ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ gị na ịgbanwe ihe gburugburu. Enwere ihe siri ike iji mezuo karịa mwepụ nke SEO. Isi SEO na-eyi ihe egwu egwu egwu nwere ike ịgụnye:
Ụzọ a na-esote siri ike ịhụ. Na mgbe mgbe, hacker na-agbakwụnye ọdịnaya spammy na saịtị. Ebe ọ bụ na a na-ezobe njikọ ndị ahụ mgbe mgbe, ị gaghị ahụ ha ma ọ bụrụ na ị nyochaa koodu ahụ.
Otu ihe ọzọ SEO nwere ike ime bụ mgbe onye na-awakpo ahụ gbanwee ibe gị, redirecting ha na ibe weebụ ya.Ụfọdụ ndị nwe ụlọ ebe a jiri usoro a iji bulie saịtị PageRank ha ma ọ bụ iji nyefee ndị ọrụ na saịtị ha mgbe ha na-agbalị ịnweta gị. Ọ bụrụ na engines ọchụchọ chọpụta banyere redirect tupu ị rụọ, ha ga-eme ka ị nweta ego gị maka redirecting na ebe nrụọrụ ọjọọ. Ịmegharị ihe na saịtị na ngwọta dịka Weebụsaịtị Weebụ bụ nhọrọ kachasị mma iji hụ mmegide ndị a.
Ị nweta Ntọala Site
Ị nwere ike iju gị anya, mana obere mgbanwe na faịlụ dị otú ahụ dị ka ígwè ọrụ ugbo. txt nwere ike kwatara gị niile SEO ahịa atụmatụ. Ọchịchị Disallow bụ ihe niile ọ na-ewe iji gwa engine engine ka ọ ghara ileghara enyemaka gị anya kpamkpam. Ọ dị mwute ma bụrụ eziokwu.
N'ụzọ dị mma, e nwere ihe ị ga - eme iji gbochie omume dị otú ahụ. Ịchịkọta oge nchịkọta oge niile ga-enyere gị aka ịghọ onye mbụ ịmara ma ọ bụrụ na ị ga-enwerịrị akwụkwọ gị. Ọkọlọtọ Tracker bụ ngwá ọrụ dị oke mkpa ị nwere ike itinye maka ịhazi ndenye ego akpaaka. Ozugbo saịtị gị na-apụ na mberede na Google, ị ga-ahụ akwụkwọ mpịakọta dị na kọlụm Difference. Dị mfe dị ka nke ahụ Source .